Mendrika ny hividy tahiry iCloud fanampiny ve ianao? | Vaovao IPhone
Miguel Hernandez | | iCloud, Apple products
Miaraka amin'ny iPhone 6s sy ny iOS 9 vaovao dia mahita vaovao vaovao hafa avy amin'ny Apple isika, ary izany dia nanapa-kevitra ny hampihena ny vidin'ny drafitra fitahirizan'izy ireo ho an'ny iCloud ireo tovolahy avy any Cupertino, ny tena tanjona dia ny hahasoa ireo mpampiasa izay Izy ireo dia misafidy ny kinova 16 GB an'ny vokatra Apple ary mazava ho azy fa manararaotra ny fahombiazan'ny serivisy fampiasan'izy ireo amin'ny rahona toy ny Apple Music sy ny serivisy iCloud Photo Library azy ireo, tsy misy isalasalana, ny 5 GB maimaim-poana omen'ny Apple azy mpampiasa dia mazava fa tsy ampy amin'ny zavatra hafa ankoatry ny fitahirizana backup. Mendrika izany ve ny famandrihana extra iCloud Storage?Ao amin'ny Actualidad iPhone dia manana fisalasalana mitovy ihany izahay, ary hanome tanana anao izahay.
1 5GB dia fohy loatra
2 Inona no natolotr'i Apple ahy?
3 Mendrika hanakarama drafitra fitahirizana ve ianao?
4 Inona avy ireo drafitra fitahirizana atolotry ny fifaninanana?
5GB dia fohy loatra
Ny mpampiasa iOS rehetra dia mahazo ny tahiry 5 GB maimaimpoana amin'ny kaonty iCloud azy ireo, izay hampiasainay amin'ny fitehirizana ireo kopian'ny nomaniny ho solon'izay, fa izay lojika dia tsy ampy ho an'ny mpampiasa izany Rehefa mampiasa serivisy mihoatra ireo backup ireo ianao, ohatra, raha vantany vao mitahiry backup roa na telo ianao dia afaka manao veloma ny tranomboky sary iCloud, tahiry haingana sy mandeha ho azy an'ny Apple izay mandeha tsara.
Inona no natolotr'i Apple ahy?
Apple dia nampihena be ny vidin'ny famandrihana, mamela azy ireo amin'ny vidiny mifaninana, toy ny tamin'ny Apple Music tamin'ny androny, nanapa-kevitra ny Apple fa hametraka vidiny ambany dia ambany mba hahafahan'ny mpampiasa azy rehetra mankafy iCloud. Ireto ny vidiny sy ny fitehirizana:
ICloud 50GB: 0,99 € / volana
ICloud 200GB: 2,99 € / volana
1TB iCloud: 9,99€ / volana
Ho fanampin'izay, tamin'ny fahatongavan'i iOS 9, nipoitra koa ny App iCloud Drive, izay manamora ny fitantanana ireo rakitra ao anatin'ny fitaovantsika, miaraka amin'ity lesona kely ity Atorinay anao ny fomba hisehoany amin'ny SpringBoard
Mendrika hanakarama drafitra fitahirizana ve ianao?
Miankina tokoa izany raha tsy hampiasa kopia backup fotsiny ianao, mazava ho azy tsia, satria tsy vitsy ny mpampiasa manana drafitra fitahirizana maimaimpoana miaraka amin'ny fahaizan'ny karazana mpizara hafa, toa ny Google Drive na Dropbox, indrindra raha tsy manana iCloud Photo Library voalamina ianao, ary tsy misy fitaovana Apple intsony eo amin'ny tontolo misy anao. Na izany aza, raha mahazatra amin'ny vokatra Apple ianao dia tianao ny iCloud Photo Library sy ny fitantanana rakitra efa nohamarinina tanteraka ho an'ny fitaovanao, tsy misy isalasalana fa anao ny fisoratana anarana 50GB raha tsy eo amin'ny tontolon'ny matihanina ianao.
Mandritra ny euro iray isam-bolana dia afaka mitahiry rakitra 50GB ianaoHo fanampin'izany, ny iCloud Photo Library dia hanatsara ny haben'ny sary ka ny fampidirana any amin'ny iCloud dia mila toerana kely kokoa amin'ny fitaovanao, tsy lazaina intsony ny fampidirana sy fampifangaroana tanteraka eo amin'ireo fitaovana Apple samihafa. Amin'ny maha mpampiasa Apple mahazatra ahy dia mamelona ny famandrihana 50GB iCloud Drive miaraka amin'ny tahiry Dropbox 60GB maimaimpoana aho. Noho izany, raha mila toerana ianao, ny famandrihana amin'ny euro iray dia tsy midika ho fatiantoka eo amin'ny toekarenao ary hanala anao amin'ny aretin'andoha maro izany.
Na izany aza, manamafy aho fa raha tsy manana suite Apple feno ianao, ny iCloud Drive dia tsy tokony ho ny safidinao voalohany, miaraka amin'ny Dropbox ohatra dia hanana rafitra fitantanana rakitra haingana sy multiplatform ianao, ary Google Drive dia manana Google Photos izay mamela antsika ho azy ihany koa. tantano ao anaty rahona ny sarinay.
Inona avy ireo drafitra fitahirizana atolotry ny fifaninanana?
Voalohany indrindra ananantsika Dropbox:
Dropbox Pro 1TB: € 9,99 / volana na € 99,99 / taona.
Etsy ankilany, fifaninanana mivantana, Google Drive:
100GB: 1,99 € / volana
1TB: 9,99 € / volana
10TB: 99,99 € / volana
20TB: 199,99 € / volana
30TB: 299,99 € / volana
Ary farany onedrive avy amin'i Microsoft:
200GB: 3,99 € / volana
1TB: 7,00 € / volana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » Mendrika ny hividy tahiry iCloud fanampiny ve ianao?
Nieritreritra foana aho fa afaka manana ny sariko rehetra ao amin'ny iCloud aho mba tsy hipetrahako amin'ny habaka amin'ny iPhone, saingy hita fa tsy izany no izy, ny sary dia mbola eo amin'ny iPhone-ko maka toerana malalaka (heverina fa kely kokoa habaka satria nohamarinina izy ireo, saingy nibodo azy ireo). Ary zavatra iray tsy azoko ... Inona no fampiasana 1TB amin'ny iCloud raha 64Gb ny iPhone? Miverina amin'ny zavatra iray ihany isika, raha tsy afaka mitahiry ny sariko amin'ny iCloud aho raha tsy eo amin'ny iPhone dia tsy mitombina izany satria tsy ho afaka mampakatra sary mihoatra ny 64Gb amin'ny iCloud mihitsy aho.
Tena misy ve ny fahasamihafana eo amin'ny habe eo amin'ny sary tany am-boalohany sy ilay sary novaina? Ny idealy dia, ohatra, ho an'ny olona mividy ny iPhone 16Gb, hahafahany mitahiry ny sary ao amin'ny iCloud nefa tsy mandray toerana amin'ny iPhone (na dia manatsara be aza izy ireo), ka raha manakarama ny drafitra 50Gb ianao, manana 50Gb ho an'ny sary sy horonan-tsary ary ny «16Gb» ho an'ny Apps.
Nesorinao ny vavako. Toa tsy tsapan'ny olona ity tsy fahombiazan'ny adala sy tavy an'ny iCloud an'ny Apple ity. Mitady zavatra mitovy amin'izany aho, ny fahafahako mampakatra azy ireo nefa tsy manome toerana amin'ny iPhone, toa ny ataon'ny Onedrive na ny Google Photos. Te hanana zavatra 100% mitovy amin'ireo serivisy roa farany aho, saingy efa, midika izany, ao amin'ny iOS 10.
Inona no mahatsara ny 1TB ao amin'ny iCloud raha 64GB ny iPhone? Fantatrao fa io kaonty io ihany dia azo ampiasaina hampifanarahana ny dika mitovy amin'ny iPhones, iPads, iTouchs ary Apple TV, sa tsy izany? Ary tsy ny angona multimedia toa ny sary na horonan-tsary ihany, fa zavatra maro hafa (Fikirana -> iCloud). Raha tsy fantatrao dia efa fantatrao.
Ny zavatra tanterahina anio, na tsy tiana, dia ny famoronana kopia backup amin'ny maody fitaratra (izany hoe eo an-toerana amin'ny fitaovana hanananao mitovy amin'ny rahona foana, ary ny mifamadika amin'izany). Vita izany satria izany indrindra no ilana ny COPIES BACKUP. Ny zavatra arosonao dia ny fampiasana ny rahona ho toy ny lahatahiry 'extra' izay ahafahanao miditra amin'ny findainao, ary azonao atao amin'ny atody app. Mazava ho azy, rehefa te-misintona sary ianao dia tsy maintsy mampidina azy io, tsy ho afaka hahita horonan-tsary sy sary amin'ny 'streaming' avy amin'ny rahona ianao.
david77n dia hoy izy:
Ary mba hamelanao ny Megaupload taloha izay antsoina ankehitriny hoe Mega. Manolotra anao 50gb fitehirizana maimaimpoana misy safidy maromaro, ny iray amin'izy ireo dia miditra amin'ny fampiharana miaraka amina kaody fiarovana, miaraka amin'ny dian-tànana na mampakatra rakitra mandeha ho azy.
Valio i david77n
Tsy azoko mihitsy ny fomba fitantanana iCloud, fantatro ihany fa mamonjy izay ananako ao amin'ny iPhone-ko izy saingy tsy azoko an-tsaina hoe ahoana no ampiana zavatra fanampiny na hijerena ny atiny amin'ny Internet amin'ny pc.
Ny hany zavatra azonao atao amin'ny solosainao dia ny mahita ny mailaka ao amin'ny kaontinao iCloud, sy ny angon-drakitra rehetra natrehinao (naoty, fampahatsiahivana, fifandraisana, na rakitra avy amin'ny fonosan'ny Apple's Office). Azonao atao koa ny mampiasa ny Find My iPhone / iPad ho an'ny toerana, fanairana ary famafana lavitra ireo terminal very.
Saingy baolina tsy misy dikany, i Luis V no hanombohany, raha mankany amin'ny iCloud.com ianao na manana Mac miaraka amin'i Yosemite na avo kokoa, na misintona iCloud amin'ny PC, dia hanana safidy antsoina hoe iCloud Drive ianao, izay ahafahanao misintona ny rehetra karazana rakitra, antontan-taratasy, mamorona lahatahiry sns sns fampirimana virtoaly ary sokafy ireo antontan-taratasy ireo amin'ny fitaovana rehetra tadiavinao na ampidinoo amin'ny solosaina rehetra. Ny fiovan'ny iCloud tamin'ity safidin'ny iCloud Drive ity dia toa tsara indrindra tamiko. Tokony ho fantatrao izany alohan'ny hanomezana hevitra tsy fantatrao.
Mampihomehy ny famalianao ahy amin'ny fomba fanaonao sy ny filazanao amiko hahafantatra zavatra alohan'ny hanomezanao hevitra, rehefa manao ilay zavatra mitovy ianao. Izaho dia namaly ny mpampiasa 'I;)' ireo fiasa azo alaina rehefa mampiasa iCloud.com, izay araka ny voalazanao, dia tsy mitovy amin'ny fampiasana iCloud Drive .... fa tsy izany no noresahiko, fa ny fidirana amin'ny browser. Andao hojerentsika raha manatsara ny fahatakarana famakiana isika ary mankany amin'ny decaffeine, mba tsy hiseho ho mampihomehy indray, 'mahafinaritra' ...
Fantaro kely i Luis V ... iCloud Drive dia mifanentana tanteraka amin'ny Windows PC sy amin'ny navigateur, tsy ho an'ny sary ihany fa ho toy ny fitahirizam-bokatra toa Dropbox.
Tena marina ny namana Cesar, raha tsy hainao ny manao zavatra farafaharatsiny dia aza tonga saina mitsikera izay tsy raharahianao.
Ny iray hafa izay tsy mahita fa avy amin'ny PC (fa ny PC dia tsy Mac, raha ny marina) tsy afaka miditra amin'ny safidinao iCloud Drive rehetra avy amin'ny tranokala ianao, fa ireo nolazaiko ihany no azonao idirana. Raha te hanana fidirana feno ianao dia mila misintona sy mametraka ny programa 'iCloud ho an'ny Windows'.
Andao, vakio kely ny momba azy eto ... sa ianao koa ve hiteny hoe lainga fotsiny ny tranonkalan'i Apple?
Mandehana any anaty ala, fantaro kely tsara kokoa, fa mandritra ny fotoana maharitra, iCloud dia azo idirana amin'ny windows (raha PC tsara) avy amin'ny tranokalanao fa tsy mametraka na inona na inona, na raha tianao dia mametraha programa ary midira ho toy ny style dropbox folder hafa .
Averiko indray ianao mba hahafahanao mahatakatra azy ... raha mampiasa PC misy WINDOWS sy mpikaroka EDGE anao ianao, dia azonao atao ny mamaky ICLUD DRIVE sy ny sisa amin'ny serivisy rehetra, mitovy amin'ny an'ny mac.
Manasa anao hiditra iCloud.com miaraka amin'ny Windows avy amin'ny mpitety tranonkala aho ary manandrana mampakatra rakitra. Ho hitanao fa tsy afaka ianao.
Marina ny an'i Agrecan, azo atao mandritra ny fotoana maharitra izy io, alohan'ny tsy vitany.
Ny fahitana fa be dia be ny olona nilaza fa diso ny nataoko, dia nanao ny fitsapana tamin'ny solosaina PC sy mpizaha tany hafa aho. Araka ny efa nolazainareo rehetra, ny rafi-pitehirizana Drive dia azo idirana amin'ny navigateur. Na izany aza, manamafy ihany koa aho fa avy amin'ny Windows XP SP2 sy Internet Explorer, tsy miseho ny safidin'ny Drive, tsy fantatro ny antony (ary noho io antony io ihany no nilazako fa tsy mandeha izy io, raha ny marina dia efa nanandrana aho taloha maneho hevitra). Miala tsiny aho noho ny nanomezako vaovao diso, saingy tsy manao izany amin'ireo izay nihevitra ahy ho mpandainga sy fomba ratsy aho raha mbola tsy nandainga na oviana na oviana.
Miala tsiny, fa fantatrao ve fa ny kaonty tokana ihany no azonao ampifanarahina azy? Ary amin'ny kaonty tokana, tsy azoko antoka fa homenao ny mety rehetra tokony ho izy, satria amin'ny safidy "Ao amin'ny fianakaviana" dia tsy azo zaraina amin'ireo mpampiasa sisa ao amin'ny fianakaviana ity toerana nifanarahana ity.
Tick__Taj dia hoy izy:
Tsy mampaninona ahy ny mijanona miaraka amin'ny MEGA, amin'ny fampiharana azy aho dia mamela sy mampakatra ny sariko rehetra ary manana 50 gigabytes aho.
Tsy dia tiako loatra ny mitahiry angona ho an'ny iCloud amin'ny lalao ataoko.
Ary mbola manana ny kapilaiko 2 TB sy backup hafa aho saingy heyoooo….
Mamaly an'i Tic__Taj
Abyy :) dia hoy izy:
Salama, te hahafantatra aho raha manampy ahy ny fividianana 50gb amin'ny iCloud, novidian'izy ireo iPhone tsy misy intsony aho ary tsy misy na inona na inona miasa na izany aza ho lany ny habaka aho raha afaka mamaly ahy ianao fa firavaka io 🙂
Valio i Abyy :)
Ankafizo ireto sary sokitra Star Wars ho an'ny iPhone ireto
Ahoana ny fametrahana fampiharana tsy ofisialy amin'ny Xcode